I-Cofttek News - Umkhiqizi wokudla ongokwakha izithako zokudla
Ngemuva kocwaningo lwango-2019 oluphethe ngokuthi iNicotinamide Mononucleotide iphephile ukuthi ingasetshenziswa ngabantu uma ukusetshenziswa kwayo kunqunyelwe umkhawulo obekiwe, izinkampani eziningi zokukhiqiza zingene emakethe neminikelo yazo. Lokhu kuchichima kokuzikhethela kushiye abathengi bedidekile ngokuthi ikuphi ukwengezwa kweNictonimade Mononucleotide (NMN) okungcono kakhulu kubo. Ngokubona kwethu, isithasiselo esihle kakhulu sokulwa nokuguga sikaNico ...
Uma ufuna isithasiselo esihle seMagnesium L-Threonate, sincoma ukuthenga i-Magnesium Threonate powder kusuka eCofttek. Le nkampani ithi ikhulisa ukutholakala kwayo kwe-magnesium emzimbeni. Le nkampani iphinde ithi i-powder enikezwe umsebenzi wokukhumbula inkumbulo yenkampani futhi ithuthukise umsebenzi wokuqonda jikelele. Zisiza nabasebenzisi ukuthi balale kangcono. ICofttek i-Anandamide (AEA) abahlinzeki abafuna ...
Uma ufuna i-powder esezingeni eliphakeme yePalmitoylethanolamide (PEA) oyithengisayo, lapho-ke usendaweni efanele. Singomunye wabakhiqizi bePalmitoylethanolamide (PEA) abadume kakhulu, abanolwazi, nabanolwazi eChina. Sinikezela ngemikhiqizo emsulwa futhi ehlanganiswe kahle ehlala ihlolwa ilabhorethri esezingeni lomhlaba esezingeni eliphansi ukuqinisekisa ubumsulwa nokuphepha. Sihlala siletha ama-oda ngaphesheya kwe-US, Europe, ...